Gudoomiye Mursal oo sheegay in la soo xiray Kalfadhigii 3-aad ee Baarlamaanka - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Gudoomiye Mursal oo sheegay in la soo xiray Kalfadhigii 3-aad ee Baarlamaanka
Gudoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Somaliya Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan oo soo Saaray Qoraal, waxa uu ku sheegay inuu fasax galay Baarlamaanka 10-aad, iyadoo uu soo xiray Kalfadhigii 3-aad ee Golaha Shacabka oo soo Bilowday 10-Kii Bishii March ee Sanadan.
Qoraal uu soo saaray Mursal oo ku taariikheysnaa 10-ka Bishan oo Shalay ku asteysneyd ayuu u kala diray Xildhibaanada Golaha Shacabka, Waxa uu sidoo kale Fasaxan ogeysiiyay Madaxweynaha iyo Xukuumada.
Qoraalka uu soo saaray Gudoomiyaha Golaha Shacabka ayaa sidoo kale lagu sheegay in 10-ka Bisha Sagaalaad ee Sanadan ay dib isugu soo laaban doonaan Xildhibaanada Fasaxa kadib, Iyadoo Baarlamaankuba ay howshiisa iska yareyd Maalmihii udnabeeyay.
Xiligaas ayaa la filayaa inuu dib ufurmo kalfadhiga 4-aad ee Baarlamaanka Somaliya, waxaana furaya Madaxweyne Farmaajo, sida Dastuurka uu qabo.
Tan iyo 30-Kii April oo la doortay Gudoomiye Maxamed Mursal Sheekh C/Raxmaan, Waxaa hoos udhacay Shaqadii Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Somaliya, iyagoo ka bixi waayay Fasaxyada Ramadaanta iyo Maalmaha Ciida oo ay ugu sii darsantay Xiritaankii Kalfadhiga 3-aad, iyadoo aan Fariisan Baarlamaanka Somaliya.
Tan iyo markii la furay Kalfadhigan Hada uu leeyahay waan soo xiray Gudoomiye Mursal, waxa kaliya ee Xildhibanaada hareeyay ayaa ahaa buuqii ka dhashay Mooshinkii laga keenay Gudoomiyihii isaga ka horeeyay, taasoo Xiisad ka dhex dhalisay Xukuumada iyo Baarlamaanka oo saameeysay labadoodii shaqo, waxaana markii danbe howsha ay ku biyo Shubatay inuu jawaari Iscasilo Cadaadiska Madaxtooyada iyo Xukuumada uga imnayay darteed.
Gudoomiyayaasha Golaha Shacabka iyo Aqalka sare ee Baarlamaanka Somaliya ayaa Todobaadkan isku raacay iney si wadajir ah usoo xirayaan Kalfadhigan 3-aad ee Labasda Aqal, lama ogase in Cabdi Xaashi isagana uu soo xiray Baarlamaanka Aqalkiisii Sare.